लाइभमा समाचार पढ्दा पढ्दै महिला एंकरको दाँत खुस्यो, त्यसपछि के भयो? (भिडियोमै हेर्नुस्) – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /Video/लाइभमा समाचार पढ्दा पढ्दै महिला एंकरको दाँत खुस्यो, त्यसपछि के भयो? (भिडियोमै हेर्नुस्)
लाइभमा समाचार पढ्दा पढ्दै महिला एंकरको दाँत खुस्यो, त्यसपछि के भयो? (भिडियोमै हेर्नुस्)
एजेन्सी । सञ्चालन भैरहेकाे लाइभ टिभी कार्यक्रममा एक जना महिला एंकरले कार्यक्रम संचालन गरिरहेकी थिइन् । तर अचानक उनको अगाडीको दाँत निस्कियो तर उनले कार्यक्रम भने लगातार चलाइरहिन् । लाइभ कार्यक्रममै मुखको दाँत निस्किए पनि उनले कार्यक्रम चलाउन भने छोडिनन् । खसेको दाँत हातमा लिइन् र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइन् । अहिले सामाजिक सञ्जालमा यो भिडियो निकै भाइरल भइरहेको छ ।
यो भिडियो उनै महिला एंकरले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेपछि अहिले भाइरल भइरहेको छ । यो घटना युक्रनको टिभी एंकरको जिवनमा भएको हो । टिभी एंकर मरीका पडल्कोले समाचार पढिरहेकी थिइन् । त्यतीनै बेला उनको अगाडीको दाँत निस्यिो । समाचार पढ्दै गर्दा उनले हाफ्नो हात मुखमा लगिन् र दाँत हातमा लिइन् अनि फेरी समाचार पढ्न थालिन् । यो घटना यति छिटो भयो की एक निमेशमै सकियो ।
तरपनि उनको अनुहारमा कुनै परिवर्तन भएन । अगाडीको भाग खाली देखिन्थ्यो उनी समाचार भने पढिरहेकी थिइन् । उनले समाचार नसकुञ्जेल कार्यक्रममा बोलिरहिन् । एंकर मारीका पडल्कोले आफ्नो इंस्टाग्राम पेजमा यस वारे विस्तारमा लेखेकी छन् । उनले लखेकी छन् ‘मेरो जिवनको २० वर्षको पत्रकारीतामा जुन मैले भोगे की शोकै समयमा मेरो दाँत मुखबाट बाहिर निस्कन लाग्यो । तब मेरो सहयोगीले तिम्रो दाँत निस्कन लागेको छ भनेर जानकारी दिएन ।
मैले हात तुरुन्तै मुखमा लगे त्यतीबेला दाँत मेरो हातमा आयो । हात मुखमा लगेर मैले दाँत भुइमा ख’स्नवाट जोर्गा । त्यती बेला न्युजको लाइभ चलिरहेको थियो । उनले अगाडी लेखेकी छन् मैले दाँत हातमा लिएर कुनै रियाक्ट नगरी समाचार पढिरहें । आफुलाई सम्हाल्दै मैले पुरै कार्यक्रम राम्रोसंग समाप्त गरे । उनको दाँत निस्कनुको बारेमा पनि बताएकी छन् । यो १० वर्ष अगाडीको कुरा हो ।
मेरो छोरा खेलीरहेको बेलामा घडीले मेरो मुखमा हा’नि’दिइन् त्यतीबेला मेरो दाँत खुसेको थियो । तर पनि मैले मेरो करियरलाई जारी राखेकी थिए । उनको यो भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । उनलाई धेरैले राम्रो प्रतिकृया दिएका छन् । उनलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले लेखेका छन् ‘तपाई निकै खास र शानदार हुनुहुन्छ ।’
वीरअस्पतालमा हेर्नुहोस् खुशीयाली, को’रोनाको त्रा’स बढिरहेका बेला डाक्टरले गरे यस्तो कमाल ! (हेर्नुहोस भिडियो)
झण्डै ३ करोडले हेरेको गीत गाएका यि गायकलाई धेरैले चिन्दैनन । ‘मुटुमा चिरा पर्या छ’ भन्दै मिडियामा आए (भिडियो हेर्नुस)